Antananarivo Kaominina tsy mahavita azy! | Hevitra MPANOHARIANA
Mba tantarao koa letsy ny fifanolanana misy ankehitriny aaa de hazavazava amin'ny rehetra ny antony mampihemotra ity tananan-tsika ity
Nampidirin'i tebokaefatra @ 14:18, 2008-09-11 [Valio]
io aloha dia politikan'ny manodidina andry zalahy e! Inona moa ny tena marina//na ny licence ny taxi ary tsy nisy nataony indray ka nampitaraina ireo izay nangataka. Mbola mety hisy koa ny resaka momba izany ka! matoa ianao hitondra dia efa mivonona amin'ny rehetra. Efa nolazaiko tamin'ny volana desambra anie fa tsy hanome vola ny fanjakana foibe noho izany efa nolazaiko mialoha ny tokony hiomanany.
Nampidirin'i jentilisa @ 15:28, 2008-09-11 [Valio]
Nandritra ny propagandy sy ny fahasahian'i Andry TGV hiditra antsehatra dia efa niteny koa aho hoe angamba i leiry mahita làlana ambanin'ny tany. Satria izay teo dia nahita làlana ambanin'ny tany daholo hitantanana sy hanatsarana be be kokoa ny tanàna.
Kay izao ny vokany.
Nampidirin'i Hery @ 15:38, 2008-09-11 [Valio]
"nahita làlana ambanin'ny tany" tokoa nedala t@ fampielezan-kevitra fa nahazo t@ frantsay sy t@ i mofo rey izy araka ny filazan'ny olona. saingy efa notsetseman'ny mpitondra itsy voalohany ary ny faharoa kosa namana sady rafy ihany koa.
tamin'ny fandalovako kely tao an-tanàna dia nahatsapa aho fa nihagoragora tokoa ny zava-drehetra : tsy atahoran'ny olona tsinona i tgv.
izay indrindra anefa no itiavan'ny olona azy dia izy tsy mahavita sady tsy manao ny kotrakotran-dry ramose. ny haharitra ilay kotrankotrana koa no asa ! raha tsy hoe ben'ny tanàna saribakoly mahafatifaty sisa ny akama fa ny zava-dehibe rehetra ho raisin'ny fanjakana an-tànana :-)
Nampidirin'i Rajiosy @ 16:23, 2008-09-11 [Valio]
Maninona moa raha atao ohatran'ny filoham-pokontany ny kaominina...tendrena indray fa tsy fidiana itsony...dia toy ny tamin'ny taloha...dia amin'izay rehefa tsy mahavita azy dia ny fanjakana izay no tsy mahavita azy...? Tsy i Andry no nanary ny poti-pako tamin'ny zaridaina...fa izay nipetrapetraka teny... eva vita ny fanokafana ny tolotra @ hanamboarana ny lapa...ny fanomezana alalana amin'ny fanombohan'ny asa no nisy sembana...(?) Ny doka eran'ny tanana = vola miditra amin'ny kaominina fa tsy any am-paosin'i Andry - raha Injet no manao azy dia vola mivaoka any ampaosin'ny Andry izay ary avy eo mitsofoka ao amin'ny kaominina... Izaho mahita hoe ny vahoaka ao anatiny no tena tsy mahavita azy :-) ...taratasy namonosana mofo akondro koa atsipytsipy fotsiny eny...
Nampidirin'i finoanaranoray @ 16:28, 2008-09-11 [Valio]
Nampidirin'i finoanaranoray @ 16:29, 2008-09-11 [Valio]
Tokony tendrena Minisitra nedala, ohatra hoe minisitry ny kolontsaina...dia atao PDS ny be'ny tanana, ohatra hoe Rafaly...raha tsy mety ministra lery dia atao ambasadoro...dia avy eo esorina rehefa tsy voasakany ny spectacle i sareraka...atao "style" Ramiaramanana...tendrena minisitra ny angovo - tsy nahavoa delestazy dia asaina mirotsaka depiote - raha vao lany dia tendrena indray "fanatanjahantena sy kolontsaina"- dia avy eo alefa..
Nampidirin'i ndrema @ 16:37, 2008-09-11 [Valio]
Izay politika tsy hihiananan-kanina izay ihany no mbola tsy hodiako any Dago :) Tsy misy conscients mihitsy ireto mpitondra ireto fa ny heviny no ampiadiany dia ny vahoaka no mihinan'ny fatiny !
Nampidirin'i Oups @ 17:05, 2008-09-11 [Valio]
Mahavita azy ry zalahy ra tsy sakasakanana,avohay ny vola dia hitanareo ny vokany
Nampidirin'i rakoto @ 17:47, 2008-09-11 [Valio]
Misaina tsara ny mpitondra ka...ary tena manampy ny kaomina mihitsy...
nalain'izao SAMVA...dia raha tsy voaraoka ny fako dia ny ministera no TSY MIASA...fa tsy ny kaomina
Notendrena ny filoham-pokontany, dia raha tsy mandeha ny fokontany dia ny ministera no tsy miasa fa tsy ny kaomina
Ny Ministera no mpanome alalana ny fivoriam-politika, ka raha misy fandrarana dia ny Ministera fa tsy ny Kaomina
Nampiana koa izao ny Kaomina amin'ny fitantanam-bola, nalefa any amin'ny trésor, mihena amin'izay ny gaboraraka...
Nampidirin'i ndrema @ 18:46, 2008-09-11 [Valio]
Ka na i ra8 koa aza moa firy% an'ny noteneniny t@ 2007 no vitany hatr@ zao :)
Ny tiako hahatongavana dia ny hoe mbola lavalava ihany ny mandat-ny ahafahany manao zavatra...
Fa io koa araka ny tenin'i ndrema hoe ze kely sisa omena sisa no tokony hiezaka ny hamirapiratra tsara izy. @ zay rehefa mitsara ny ol dia afaka miteny ireo kozin'i ndrema ireo izy...
Fa lery koa aloha mitady rara no tena marina e. Zaran'lery aza raisin'ny fanjakana ireo zavatra tsy mande firy sady izay mandany ny volan'ny kominina fotsiny... asa, tsy haiko aloha eee :)
Nampidirin'i simp @ 20:23, 2008-09-11 [Valio]
Resaka tsy mahafehy ny mpiasa amiko no tena olana amin'ny fahalotoan'ny tanàna toy ny eto Analakely. Mitovy ihany ny nataon'ny olona na iza na iza no mitondra fa izaho nahatsikaritra tsara mihitsy fa nahavatra niondrika nitsipona mihitsy ireny mpandroaka fako tamin'ny zaridaina ireny tamin'ny mpitondra teo aloha, hany ka na inona na inona nataon'ny olona nandalo teo tahaka ireny hoe tsy nisy nandalo afa-tsy ny manadio no teo. Ankehitriny, raha mbola tavela ireny fako ireny tao ho ao dia kamo hanao azy ny mpiasa. Inona ny antony? Mety ho ny fandrisihana azy ireny mihitsy no tsy misy na ny fahatsapany fa tsy nisy nahita ny ezaka nataony.
Na izany na tsy izany, tsy mahita toerana anariana ny fako mihitsy aho ka! fa ny ahy aloha ataoko anaty kitapo misy pilasitika foana e! anjara fitiavako an'Antananarivo izany.
Nampidirin'i jentilisa @ 20:25, 2008-09-11 [Valio]
milay kosa le sary 2 farany an. Otran'ny hoe tsy Tana izany le toerana :)
Nampidirin'i simp @ 20:25, 2008-09-11 [Valio]
Ilay iray eo ambony lazainao io any Mahajanga ka
Nampidirin'i jentilisa @ 20:26, 2008-09-11 [Valio]
Raha hiresaka momba ny dokambarotra atsatoka anaty zaridaina indray, tsapako aloha fa manimba endrika ny tanàna ilay izy nefa tokony hifandrindra amin'ny tanàna no tokony ho izy. Azo eritreretina ve, na dia tsy mbola nivoaka an'i Madagasikara mihitsy aza aho, hoe eo anoloan'ny Tour Eiffel eo dia misy tsatoby na takelaby manelingelina amin'ny fakana sary? Na raha tsy mety iny ohatro iny, azo vinaniana ve raha eny amin'ny sisin'ny zaridainan'ny Chateaux de Versailles misy tsatoby anaovana dokambarotra? Saropiaro amin'ny tanànako aho noho izany manana adidy hilaza ny tsy mahamety ireny dokambarotra amina faritra amantarana an'Antananarivo toy iny zaridainan'Analakely iny.
Nampidirin'i jentilisa @ 20:27, 2008-09-11 [Valio]
Tsy dia manan-kambara fa dia kivy kely (toy ny mahazatra) mahita an'ilay sarin'ny lapan'ny tanàna taloha e :(.
Vao t@ herin-taona ohatr'izao anefa dia milay be teo. Mbola ahafahana mampiaraka tsara hahahaha. Nisy zedezil koa moa t@'zany e.
Isika gasy aloha tena mbola tsy mahakarakara zavatra e (bangoiko tokana ao daholo na vahoaka na mpitondra).
jentilisa> ary le zedô (jet d'eau hihihi) ery Ankorondrano tokoa ve mbola ao e hihihihi
(fahagagana angamba raha io no mbola ao a :) ).
Nampidirin'i tokinao @ 21:24, 2008-09-11 [Valio]
simp> le sary alohan'ny farany ange ka jangilina e hihihi
fa na izany aza, milay le "rond point" (teboka fihodinana hihihi) eo Anosy-mahamasina, sy ny Avenue Analakely.
Nampidirin'i Tokinao @ 21:34, 2008-09-11 [Valio]
Misaotra be dia be an' i Jentilisa kosa aloha tamin' ireto sary be dia be ireto, fa tena mampiseho ny zava-misy ao an-tananantsika mihitsy ireo.
Efa hatry ny ela mihitsy aho no nitady sary toy ireo.
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 07:33, 2008-09-12 [Valio]
Hitanareo fa mitovy fijery amiko i Jentlisa a! Raha mandalo eto zao ny namana DotMg de ho gaga oe manao jery mitongilana izahay mitsam! ny tena marina dia te-hanitsy ny antoko tim ny vahoaka t@ fifidianana fa tsy dia ny ho avin'ny tanana no tena nojerena! vote sanction fotsiny iny izany ka samy mioty ny vokany isika. Soa ihany fa nalain'ny fanjakana daholo ny asa stratejika rehetra fa raha tsy izay dia gisitra Antananarivo.
Ny orinasa ny Injet anefa dia inoko fa nihombo avo roa heny ny tombom-barotra tao anatin'izay 6 bolana izay satria maro ny contrat azo ao @ CUA.
Nampidirin'i news2dago @ 09:41, 2008-09-12 [Valio]
Tsy voalazako tsara angamba ny amin'ny nahamaika ny mpitondra ny Kaominina ankehitriny hamefy ny misy io tokony hanorenana ny lapan'ny tanàna io na misy adino. Rehefa vita ary ny fanaovana ny fetim-pirenena teny tamin'ny volana jona izany dingana voalohany namotehana ireo zaridaina rehetra ireo. Nohitsakitsahin'ny olona ny zaridaina izay tsy nisy nanitsaka mihitsy teo aloha fa raha nisy izany dia tsy menatra mihitsy ny mpiasan'ny fivondronana niteny ireny karazan'olona ireny, dia tsy nisy ny nibedy azy ireny. Rehefa hitan'ny maro vitsivitsy fa tsy misy mibedy ry zalahy dia nananganany afo tamin'io bozaka io ry zareo a! tahaka ireny mandoro pneu fa mangatsiaka ireny saingy fatapera no nentin-dry zalahy. Narary ny foko nahita izany saingy tsy afa-niteny aho satria efa mitorovaka eny amin'ny bozaka avokoa ny olona... tahaka izay ao mpiasan'ny voaria hoy Ifanihy izay, sa tsy hainareo izany hira efa talohaloha izany?
Iray izay, faharoa manaraka izany, rehefa voafefy ilay manatrika ny lapan'ny tanàna dia ho mora kokoa indray ny hamoriam-bahoaka eny... Efa vitany iny tsinona tamin'ny fetim-pirenena ka! Izao misy fefy izao izy tsy misy ahiahin'ny olona intsony hoe sao dia simba ny zaridaina tsara tarehy, efa nopotehina teo. Famoriam-bahoaka ho amin'inona anefa? rehefa 13 mey no resahina dia handrodanana mpitondra ihany no tena tanjona. Tena mety misy tsy mahavita ny fe-potoana iasany izany ny iray amin'ny Ben'ny tanàna Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana raha izany k'ty!
Hiverina ihany koa amin'ny resaka fiantsonana eny Ampasapito aho fa fanararaotra izao. Diso fijery ny Kaominina sy ny mpanohana azy mijery azy amin'ny lafiny politika. Politika ahoana moa izany? Fantatry ny rehetra mpanara-baovao fa mpikambana TIM ny maro ao amin'ny Kompima ilay tokana tsy nanaiky ny fandaminan'ny Kaominina. Noho izay no iheverany fa mitsivala-pandry fotsiny ity Kaominina ity. Tsy mety jereny anefa ny fitiavan'ny olona mandeha amin'io Kompima io noho ny tolotra tsara ataony ka mety haharatsy laza azy eo anatrehan'ny mpandeha izay mety ho be no nifidy azy tamin'ny volana desambra. Fahadisoan-tetika miaraka amin'izany: hieritreritra ireo mpandeha ireo fa hay misy zavatra tsara vitan'ny mpikambana TIM ihany nefa sakatsakanan'ny TGV. Sa tsy mety resy lahatra amin'izay ihany? Mandehana manontany mivantana ny mpandeha Antananarivo Moramanga dia mahaiza mihaino tompoko, dia ho hitanareo ny marina.
Fehiny, eo amin'ny lafiny politika tsy misy mifampiantra izany, fa matoa misy izany satria mifampatahotra... mitovitovy ny hery.
Nampidirin'i jentilisa @ 09:57, 2008-09-12 [Valio]
Izaho dia tena nalahelo t@ io zaridaina Analakely io noravana, ary vao maika tena sorena raha mahita ny tarehiny @ zao. Miteny ho azy io sary asehonao io.
Naninona moa raha navela teo ihany aloha raha mbola tsy hita izay soritsoritra hanaovana azy fa rehefa tena vonona ny zavatra rehetra dia izay vao noravana.
Mba aiza zao ny plan vert izay efa nipetraka teo aloha, ny efa maitso aza izao nopotehina indray ary ny hafa tsisy fikarakarana mihitsy.
Momba ny loto indray, marina fa betsaka ny voretra fa raha tena hentitra koa ny tompon’andraikitra dia tsy haloto mihitsy ny tanàna. Io koa rehefa hitan’ny olona fa madio dia tsy ho sahy loatra izy handoto. Ary tsetsatsetra tsy haritra koa fa tena lasa vitsy ireo mpamafa lalana an! Sa moa ireny lay anisan’ny betsaka voaroaka teo?
T@ andron’ny teo aloha dia nisy fanentanana t@ radio sy tele nampianatra ny olona hitandro ny fahadiovana. Ry fou hehy no nanao azy. Tena fitaizana tsara ho an’ny vahoaka ireny. Fa efa nentin’ireo teo aloha nanaraka azy koa angamba ireny fandaharana ireny, ary tsy te-hamerina ireny ny tato afara satria sal@ hoe maka tahaka. Nefa ny CUA manana tele sy radio e!
Nampidirin'i bozyboleta @ 11:44, 2008-09-12 [Valio]
Ny antsika ny mandrava hay mora foana fa ny hanorona sy ny hitandro ny zavatra tsara kely mba misy tsy mba hay mihitsy.
Hitohy ny tantara e! ary efa tsinjo ny tohiny ka mila mailo tsara sao dia ho diso fanantenana eo indray.
Nampidirin'i news2dago @ 12:15, 2008-09-12 [Valio]
"Centre Franco-Malagasy" ve sa "Cercle Franco-Malgache" tahaka ny nahalalana azy taloha ? ary ilay hazo makarakara natao eo @ ilay tehezana etsy akaikin'ny anciens combattants (Anosy) ve mba vitan-dRaAndry ihany sa tandrametaka tahakan'ilay carreaux mitakosona ao @ tonelin'Ambanidia indray ? mandroso mihemotra tahaka ny lelon-jaza hono isika malagasy :-)
Nampidirin'i Rajiosy @ 12:33, 2008-09-12 [Valio]